Fankalazana ny 21 jiona Andron’ny Baiboly
juillet 5, 2011 Par madadmin Leave a Comment
Diaben'ny Baiboly tany Tsiroanomandidy nanokafana ny Andron'ny Baiboly, 18 jiona 2011
21 jiona 1835 – 21 jiona 2011, feno 176 taona ny Baiboly Malagasy . Ny FMBM dia manamarika hatrany io vanim-potoana io isan-taona satria io no ANDRON’NY BAIBOLY.
21 jiona, Andron’ny Baiboly: Endrika maro samihafa no nentina nanamarika izany
Endrika maro samihafa no nentina nanamarika izany manerana an’I Madagasikara sy tany amin’ireo
Afisy nampahafantarana ny olona hanatrika ny fampirantiana ny tantaran'ny Baiboly, Frantsa 21 jiona 2011
Firenena hafa izay misy Komitim-paritra na Fiangonana Malagasy. Anisan’izany ohatra ny tany Frantsa izay notanterahana tao amin’ny Fiangonana FPMA Ex-Marseille ka nahitana ny fampirantiana ny tantaran’ny Baiboly Malagasy. Fa nanamarika izany koa ny teto amin’ny Foibe FMBM tamin’ny alalan’ny fotoam-pivavahana ka nampahafantarana ilay hetsika fanohanana ny Baiboly “ Ariary Zato am-pinoana isan’andro” sy ny tranoheva fivarotana Soratra Masina manoloana ny Foibe ka nahitana fihenam-bidy tamin’ireo vokatra ho an’ny ankizy ary ny Herinandron’ny Baiboly. Fa niavaka tanteraka kosa raha ny tany amin’ny faritra Bongolava tao Tsiroanomandidy satria dia tamin’ny alàlan’ny Diaben’ny Baiboly, Bibleton ary fandefasana horonan-tsary masina no nanamarihana ny Andron’ny Baiboly ary dia fahombiazana tanteraka izany hetsika izany izay niarahana tamin’ny Komitim-paritra tao an-toerana.